Yan Dyuritsa: izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana Slovak football player futhi umdlali we-Moscow "esitimela"
Yan Dyuritsa wazalelwa endaweni ebizwa Dunajska Streda Disemba 10, 1981. Kuyinto Slovak footballer owaziwa, ngubani okwamanje welungelo eMoscow club "Lokomotiv" nethimba Slovak kazwelonke.
Ngaqala ukuba ahileleke football Yan Dyuritsa kusukela ebuntwaneni, njengamanye abasubathi abaningi. Ithimba Waqala washumayela FC "kaJehozadaki", lapho kudlalwa kusuka 2001 kuya ku-2003. isidlali Lezinyawo kwesokunxele emkhakheni iminyaka emibili, izikhathi 26, futhi sonke leso sikhathi ikhiphe omunye umgomo. Khona-ke wahlala iminyaka emithathu, kusukela ngo-2003 kuya 2006, owadlalela "u-Arthemisi." Yena ibala 78 okufanayo iqembu. Ukuba yingxenye yaleli qembu, Yang amagoli amabili. Ngokuvamile isondo emabhola esangweni abaphikisi sika - ambalwa hhayi injongo yawo. Futhi akusiyo okuningi kangaka ikhono, kodwa isikhundla. Ngemva Yan Dyuritsa, isithombe okuyinto anikezwa esihlokweni - lo mdlali, hhayi umgadli.
I club elilandelayo ngemuva "Artimedy" baba "Saturn" (Ramenskoye). Lokhu iqembu football odlale iminyaka emibili futhi 72 ukufana amagoli amabili. Ekugcineni, "esitimela". Ku-Moscow isidlali club kusuka 2009. Futhi kuze kube namuhla livikela imibala yayo. Yiqiniso, aqashiwe FC "Hannover 96" ngo-2010, umdlali webhola, lapho umdlali wachitha ukufana ayisishiyagalolunye.
On kwathatha "esitimela"
Lapho isidlali Slovak e 2009 wadlulela "esitimela", yayingase ibizwe kubhekwe umdlali zakwamanye amazwe nomkhawulo abadlali angaphandle. Ngaleso sikhathi, kakade kudlalwa iminyaka emithathu e-Russian football phiko futhi ngempela kahle ulimi lwethu. Ngaphezu kwalokho, Yan Dyuritsa uyakuthanda umphakathi, abagijimi, abalandeli futhi wonke ngiyabonga okunye kwesimo sayo bejabule, friendly futhi nobudlelwano. isidlali Slovak ivuliwe ngokuya kakhulu nawo wonke umuntu, eziqala bomshado club, ophela izintatheli.
Lalo e-"esitimela" ibhola liye ngizumeke. Nokho, ukuze azibonakalise ngezinga umxhwele, nje akusebenzanga. Futhi umdlali ngokwakhe cishe akanacala. Iqiniso liwukuthi emdlalweni wakhe wokuqala, yena walimala kakhulu, ngenxa okuyinto okwakungafanele isinyathelo amasonto amathathu. Futhi-ke, ngithe sengibuya, ngathola dedengu ukususwa kule game, ezenzeka Kazan. Ngakho isizini yokuqala Yan Dyuritsa ayihlala imidlalo 10 nje, futhi ebusika, wathunyelwa eJalimane "Hannover".
club German ngaleso sikhathi kwakuwukuthola esimweni esinzima. Nokho, ngenxa yemizamo abadlali bakhe, kanye yaqashiswa Jana Ithimba ngeke limane lifakwe kusukela Bundesliga kuqala. Slovak umdlali kahle wazibonakalisa, ngokudlalela "Hannover". Ngakho akungabazeki ukuthi uzoya 2010 World Cup njengabantu obambisene yabo kazwelonke, wayengekho. Ngakho kwathi. By the way, iqembu Slovak ngesikhathi ubuqhawe Wethule emhlabeni wonke i ukuzwa okuhle ngendlela engakholeki. Lo mcimbi wamangaza wonke umuntu. abadlali Slovak wathumela kalula ekhaya amaNtaliyane empeleni ngaleso sikhathi kwakukhona Champions zamanje! Ian kudlalwa zonke emidlalweni emine. Futhi ngaleso sikhathi, ekupheleni kwesizini ka 2009/10, isikhathi abadlali sokuqasha usuphethiwe. Futhi wabuyela "esitimela", lapho aba khona umdlalo egcwele ngaphandle ukulimala, bese isusa. Ngo round yokuqala amaphuzu umgomo ngokumelene "Dynamo" futhi ngawo lowo nyaka waba umlweli main the club.
Izimpumelelo kanye nempilo yakho
Kanye nethimba eMoscow Yang won indondo lethusi we Championship Russian futhi Cup yezwe. Futhi omunye wabadlali 33 best of the Premier League (kanye kabili).
Futhi esinye Iphuzu elithakazelisayo mayelana umdlali ofana Yan Dyuritsa. ukuphila Siqu - Kuyathakazelisa. Esikhathini esithile footballer wahlala emshadweni yombango nge Maria Gorban - actress abadumile Russian cinema kanye yaseshashalazini. Kodwa-ke abantu abasha Ushiye. Manje ibhola kakhulu nokuba nobuhlobo Magdalena Shebestovoy. Lo mbhangqwana 2 Meyi 2015 kwazalwa indodakazi yami, bona ogama lakhe nguNina.
What uhlala okufisa footballer injabulo ekuphileni komkhaya futhi sikufisela inhlanhla ku- enkundleni yebhola - ukuthi wakwazi ukunqoba imiklomelo ngaphezulu futhi izihloko.
David Villa: Into Engakwenza Impumelelo footballer odumile
"Celta" (Vigo) - club we-Spanish La Liga
Yikuphi ukudla okuqukethe i-vitamin H? Indima nokubaluleka kwe-vitamin H yomzimba
Indlela ugcwalise ifomu okwesikhathi Schengen visa efanele
Ukulungisa ezingemuva iwindi Ukushisa izandla siqu
Lada Priora hatchback - isithunzi nangobuciko
Berdsk, sanatorium "Sibiryak": incazelo nokubuyekeza
Thunga ingubo ngezandla zabo ilula
Swing amasango ngezandla zabo. Imidwebo, tekwentiwa futhi ukufakwa, ukufakwa automatics
Izakhiwo awusizo, amavithamini, ikhalori kokuqukethwe. Izaqathi - isibambiso wobuhle nempilo
Isipho nogologo - Present azwakale kamtoti